मिस नेपालको फिल्म ! ३ बर्षमा टिजर, कति बर्षमा फिल्म ? -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
मिस नेपालको फिल्म ! ३ बर्षमा टिजर, कति बर्षमा फिल्म ?
फिल्मी फण्डा । पूर्व मिस नेपाल निकिता चाण्डकको डेब्यु भनिएको फिल्म रानीमहल निर्माण टिमको आन्तरिक द्धन्दका कारण रोकिएको थियो । करिब ३ बर्ष अघि घोषणा लगतै छायाँकनमा गएको फिल्मको बजेट २ करोड अनुमान गरिएको थियो ।
२० प्रतिशत छायाँकनमै फिल्मको बजेट सकिएपछि निर्माता बिमल भुषाल छक्क परे । फिल्मको छायाँकनको लागि थप रकम चाहिने भएपछि निर्माण नियन्त्रक गणेश सापकोटा र निर्देशक हिमाल न्यौपानेसँग निर्माता भुषालको मनमुटाव शुरु भयो ।
शुरुमै योजना बनाएर फिल्म सुटिङमा गएकोले भुषाल थप रकम निकाल्न तयार भएनन् । जसको कारण फिल्मको सुटिङ नै रोकिएको थियो । पूर्व मिस नेपाल निकिताले राम्रै डेब्यु गर्ने भनिएता पनि उनको सपना ओजेल पर्ने जस्तो अवस्था आएको थियो ।
तर उनले पछि बिराज भट्टले निर्माण तथा निर्देशन गरेको फिल्म साङ्लोमा काम गरिन् । साङ्लो नै उनको रिलिजमा डेब्यु फिल्म भयो । त्यहि फिल्म रानीमहलले ३ बर्ष पछि लकडाउनको समय एकाएक टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रवार सामाजिक सञ्जाल युट्युबबाट सार्वजनिक गरिएको टिजरमा निकिता चाण्डक र प्रितमराज सेञ्चुरीलाई महत्व दिईएको छ ।
फिल्मका मूख्य कलाकार यी दुई नै हुन् । एक्शन लभस्टोरी भनिएको फिल्मको टिजरले पनि त्यहि बोलेको छ । फिल्म छायाँकन भएको तीन बर्षमा टिजर त आयो । तर, फिल्म रिलिज होला त भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । निर्माता, निर्देशक र निर्माण नियन्त्रकबीच भएको झगडापछि फिल्मको छायाँकन नहुने निर्माताले बताएका थिए ।
निर्माता भुषालले फिल्म पूर्ण नहुने र भएपनि टिम परिवर्तन हुने जानकारी त्यतिबेला दिएका थिए । त्यसपछि फिल्मको छायाँकन भएको खबर कहिल्यै आउन सकेन । तर, यतिखेर सोही टिम सहितको टिजर बाहिर आएको छ । जति सुटिङ गरिएको थियो ।
त्यसैको आधारमा टिजर आएको निर्माण टिमले जनाएको छ । फिल्मको थप छायाँकन भयो की भएन ? या फिल्मको आन्तरिक मनमुटाव मिल्यो की मिलेन भन्ने वारेमा निर्माण टिमले कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् । बुझिए अनुसार लकडाउनमा राम्रो प्रचार हुने सोचेर टिजर सार्वजनिक गरिएको हो ।
जसले गर्दा लकडाउनपछि अवस्था सामान्य हुदाँ नयाँ निर्माता खोज्न सजिलो हुने आँकलन रहेको बुझिएको छ । पछि नयाँ निर्माताको खोजी गरि फिल्म पूरा गर्ने हेतुले टिजर ल्याइएको निर्माण टिम मध्यका एकले फिल्मी फण्डालाई जानकारी दिए ।
यसो त फिल्मकी मूख्य कलाकार नायिका निकिता चाण्डकलाई समेत टिजरको वारेमा केही जानकारी छैन । उनले आफुलाई फिल्म र टिजर वारे कुनै जानकारी नभएको फिल्म फण्डालाई बताईन् । २० प्रतिशत छायाँकन सकिएपछि फिल्मको सुटिङ रोकियो । तयसपछि आजसम्म मलाई कुनै खबर आएको छैन, निकिताले थपिन् ।
कोरना भाइरसका कारण शुन्य अवस्थामा रहेको फिल्म क्षेत्र कसरी उठ्न सकिएला भन्ने बहस चलिरहेको बेला फिल्मको टिजर आउनुमा कुनै कुनै आंशका रहेको पक्कै बुझ्न सकिन्छ । तयारी अवस्थामा रहेका फिल्मले यतिखेर प्रचारलाई बन्द गरिएको छ ।
नयाँ निर्माण थालनी गर्न लागेका फिल्मले तत्काल सुटिङमा नजाने संकेत गरेका छन् । यहि अवस्थामा २० प्रतिशत छायाँकन भएको फिल्मले टिजर ल्याउनु संयोग मात्रै पक्कै होईन । यदि नयाँ निर्माताको खोजीकै लागि लकडाउनको बीचमा टिजर ल्याईएको हो भने यसलाई फेरिपनि नेपाली फिल्मको विकृतीलाई उजागर गर्न खोजिएको बुझ्न सकिने ।
पुरानै विकृतीमा नेपाली फिल्म क्षेत्र रहेको सञ्देश फेरि जानेछ । आम फिल्कर्मीले सहकार्य गर्दै नेपाली मौलीक विषयबस्तुमा आधारित भएर फिल्म निर्माण गर्नु पर्ने अबको अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा फिल्मको लागि निर्माताको खोजी गर्नु वा अनावश्यक प्रचारलाई अंगाल्नु गल्ति हुनेछ ।
आशा गरौं रानीमहल चाँडै तयार हुनेछ । सोही निर्माण टिमले फिल्मको बाँकी छायाँकन पुरा गर्नेछ र लकडाउनपछिको फिल्म क्षेत्रलाई उठाउन यसले थप एउटा ईट्टाको काम गर्नेछ ।